किन हुन्छन् पटकपटक विवादास्पद नियुक्ति ? « Janata Samachar
किन हुन्छन् पटकपटक विवादास्पद नियुक्ति ?
प्रकाशित मिति : 13 September, 2018 2:52 pm
यस्तो लाग्छ, हामी नेपाली भ्रष्टहरु पुरस्कृत भएको हेर्न, भोग्न अभिसप्त छौँ । लामो श्रृंखला छ भ्रष्टहरु पुरस्कृत भएको देख्नु परेको । हामी पञ्चायतलाई ‘भ्रष्ट व्यवस्था’ भन्थ्यौँ । त्यो भ्रष्टाचारमा चुुर्लुम्म डुबेको व्यवस्था थियो । हामीले आशा ग¥यौँ, ‘बहुदलीय ब्यवस्थामा यो सबै हुने छैन । त्यहाँ जननिर्वाचित संसद हुनेछ, त्यहाँ जननिर्वाचित अन्य तह वा निकाय पनि हुने छन् । जनताबाट निर्वाचित हुनेहरु आमजनता र आफू संलग्न पार्टीप्रति उत्तरदायी हुने भएका कारण हरेक काम पूर्ण इमानदारी साथ गर्ने छन् ।’ आमनेपालीका आशा¬–अपेक्षा यही थियो । २०४८ मा बनेको देशको दोस्रो कांग्रेसी सरकार (पहिलो २०१५ सालको निर्वाचनबाट बनेको)ले जनताका तमाम आशा–अपेक्षामा छिट्टै तुषारापात गरिदियो । २०५१ को नौ महिने सरकार बाहेकका करिब २० वर्षमा भ्रष्टाचारका कुनै न कुनै घटना अगाडि आइरहे ।
प्रतिनिधिमण्डलका नेता, ‘महामहिम राष्ट्रपतिज्यू, भ्रष्ट तथा विवादास्पद छविका व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील स्थानमा नियुक्त गर्नु देशकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ । जनस्तरमा यसबारेमा व्यापक विरोध भइरहेको छ । यसर्थ महामहिमले एकपटक मन्त्रिमण्डलका अध्यक्षलाई ‘पुनर्विचार गर्न’ सिफारिस फिर्ता पठाइदिन सक्नुहुन्छ । त्यसो भए यो रोकिने थप वातावरण बन्न सक्छ ।’
न्यायपरिषदमा खेमनारायण ढुंगाना नामका एक पात्रलाई नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले न्यायपरिषद्को अध्यक्ष बनाएको थियो । उनको समितिले विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस ग¥यो भन्ने कुरा बाहिर आएपछि न्याय क्षेत्रका प्रायः सबै विरोधमा उत्रिए । बार काउन्सिल खुलेरै विरोधमा उत्रियो । त्यतिखेर निज खेमनारायण ढुंगानाले सार्वजनिकरुपमै प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए, ‘गहिरो समुद्रबाट मोती निकालेजस्तो गरी अत्यन्त राम्रा, सुयोग्य र निर्विवाद व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ ।’